ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစမတ်မြို့ကြီးများညီလာခံကို Ankara တွင်ကျင်းပခဲ့သည်
25 / 05 / 2017 06 တူရကီ, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, တူရကီ
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, အများကြီးထိရောက်, စည်ပင်သာယာန်ဆောင်မှုများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်စီးပွားရေးလုပ် ပူးပေါင်း. ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းနှင့်အတူစမတ်မြို့ applications များ, သူတို့ကရှုပ်ထွေးမူအကငျြ့ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုဖျောအချို့မြူနီစီပယ်ဘို့အခြေခံအဆောက်အအုံန်ဆောင်မှုကိုယူသောနေရာများ, "ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြို့ပြဝန်ကြီးဌာနအားဖြင့်ဥပဒေပြုအတွက်လိုအပ်သောအစီအမံအောင် ယင်းဥပဒေပြဌာန်းနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့ရှိသည်မြူနီစီပယ်စွန့်ခွာ။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Arslan, ပြည်သူ့နည်းပညာပလက်ဖောင်း (KTP), အ ATO Congresium အားဖြင့်စမတ်မြို့ကြီးများအပေါ်နိုင်ငံတကာညီလာခံဖွင့်ပွဲဖွဲ့စည်း, နည်းပညာ၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသက်ရှည်သမျှရှုထောင့်ရှိအမူးဝြေခင်းစသောအပြောင်းအလဲမှဦးဆောင်ကပြောသည်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးအမ်းစထရောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏ကြီးမားသောလှိုင်းလုံးအဲဒီလှိုင်းတံပိုး, ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောစက်မှုဇုန်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြဿနာများအဖြစ်ဒေသများရှိရရှိလာတဲ့, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်, မြို့ပြကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စွမ်းအင်, ကျန်းမာရေးရရှိခဲ့ပါပြီ "စိုက်ပျိုးရေးစီးပွားရေးစက်မှုစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှကျေးလက်ဒေသကနေမြို့ကြီးများမှစတင်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖြေရှင်းချက် '' တို့ကပေးအပ်သည့်ရလဒ်များမတ်မွို့ "အယူအဆ။ " ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုသူကပြောသည်။
Arslan, Smart မြို့ကြီးများ၏အယူအဆ, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် "က၎င်း၏ကလူမြို့ပြဒေသများတွင်နေထိုင်နှငျ့အညီနည်းပညာနှင့်ဘဝကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်းစားဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီး" ။
ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များ၏မြို့ပြအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပြဿနာများမှဖြေရှင်းချက်များအတွက်အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြုလုပ်ဖျောအမ်းစထရောင်း၏အရှိဆုံးအကျိုးရှိစွာအသုံးချသေချာကြောင်းနည်းပညာသစ်များနှင့်စနစ်များနှင့်အတူအဓိကဝန်ဆောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ converting စမတ်အောင်:
"ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်စမတ်မြို့ကြီးများနိုင်ငံသားများကမ်းလှမ်းများစွာန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ဘရော့ဘန်းအင်တာနက် access ကိုတိုးမြှင့်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖိုင်ဘာလိုင်းများ၏အရှည်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် 14 80 300 တထောင်ကီလိုမီတာတထောင်ကီလိုမီတာတိုးလာပါတယ်။ 2009G ပေးခြင်း3ထံမှမိုဘိုင်းကွန်ယက်န်ဆောင်မှုကိုလည်းဧပြီလ 2016 ကနေကျနော်တို့က 4,5G အဆင့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ဝန်ဆောင်မှု 4,5G 1 52 သန်းတစ်နှစ်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအ subscriber များအားအရေအတွက်လွန်ပြီ။ ဤသည်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူများကိုသင်တို့သိရတစ်ဦးထက်ပို-တတိယ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း subscriber များအားအရေအတွက်ကျနော်တို့ 75 သန်းကျော်သွားပြီ။ မိုဘိုင်းစာရင်းပေးသွင်းထားသူထိုးဖောက်မှု 94 ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ စက် interprocess ဆက်သွယ်ရေး (M2M) subscriber များအား၏နံပါတ်4သန်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီကမ္ဘာပေါ်မှာဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းနှင့်မိုဘိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး, ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့သည်လည်းအကောင့်သို့အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တာ, ပိုမိုမြန်ဆန်တည်ထောင်ရန်သင့်ကြောင်းသိကြ၏။ "
"ကျနော်တို့ကတိုင်းပြည်တိုင်းထောင့်မှ broadband access ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်ထား"
Arslan အတွက်အသိဉာဏ်မြို့ကြီးများဝန်ကြီးဌာနလေယာဉ်မှူးနှင့် ပတ်သက်. ဖွဲ့သောမျဉ်းသားသူကိုသူတို့မတ်လ Kars အတွက် 30 အသက်တာ၌ဤအရာတစျခုရှိခဲ့ဟုပြောသည်။
Kars အတွက်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ထဲကနေအလင်းရောင်, bulutt ၏လမ်းဆုံမှမျက်လုံးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအမ်းစထရောင်းအားလုံးပြည်နယ်များမှလျှင်မြန်စွာပြန့်နှံ့ဖို့, များစွာသောအသိဉာဏ် system ကို setup ကိုပြုမိကြောင်းသတိပေးသူတို့ကဤ application များအတွက်ဂရုမစိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Arslan, သူတို့ကတိုင်းပြည်တိုင်းထောင့်မှ broadband access ကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရည်ရွယ်နေကြသည်, သူတို့ကတူရကီရဲ့အမျိုးသား Broadband မဟာဗျူဟာ၏မူဘောင်အတွက်လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းထုတ်ဝေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မြို့ကြီးများနှင့်အသိဉာဏ်မြို့ပြများတွင်နိုင်ငံသားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အစည်းအဝေး၏အခြေခံပေါ်မှာအကောင်အထည်ဖော်ပြောနေကြပါတယ် Arslan သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မဟာဗျူဟာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူတိုင်းပြည်၏အနာဂတ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်, ထိုအမျှင်ဓာတ်နှင့်ခြေရင်းဘူတာရုံသို့မဟုတ်အလျင်အမြန်အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ထောင်ရန်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
"လုပ်ငန်းရှင်များဤအခြေအနေတွင်ခွင့်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဆပ်ရန်။ အော်ပရေတာကဒီအခြေခံအဆောက်အဦအချို့မြူနီစီပယ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအတော်များများရင်ဆိုင်နေရယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ကျနော်တို့စမတ်မြို့ applications များမြူနီစီပယ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမြူနီစီပယ်လည်းဒီယုတ္တိဗေဒနီးစပ်လာအလိုရှိ၏။ အဆိုပါစည်ပင်သာယာအများကြီးပိုလွယ်စမတ်မြို့ applications များနှင့်အတူန်ဆောင်မှုများ, ထိရောက်ပေမယ့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကံမကောင်းသူတို့သဘောထားကိုသို့စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးဝင်အနာဂတျတှငျသူတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်မှုအမှတ်တမဲ့ရဲ့အလှူငွေလွယ်ကူချောမွေ့ရန်သူတို့ကိုအစားထိုးအချို့မြူနီစီပယ်ဘို့အခြေခံအဆောက်အအုံန်ဆောင်မှုယူဘယ်မှာ, တတ်နိုင်စေရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၌ရှိကြ၏။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းခုနှစ်, ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူလိုအပ်သောအစီအစဉ်များအောင်ဥပဒေပြုခြင်း, ဥပဒေပြုနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့ရှိသည်မြူနီစီပယ်စွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမကူညီဘူးဆိုရင်ဤလျှောက်လွှာကိုကျွန်တော်တည်းဖြတ်ရေးဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်သူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်, ငါတို့လူမျိုးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ "
အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို Arslan ၏လယ်ပြင်တွင် 2012 ကတည်းကကြောင်းအထူးကြပ်မတ်အလုပ်ကိုရှင်းပြ, အမျိုးသား Intelligent သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များမဟာဗျူဟာစက္ကူနှင့်မေလတွင် 2014-2016 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဖော်ထုတ်တိုးတက်မှုများအတွက်မဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စမတ်မြို့ကြီးများအတွက် Action Plan ကပြောသည်။
သူတို့ရည်မှန်းချက်များ 2023 ရရှိအသစ်အရေးယူမှုအစီအစဉ်ကိုပွငျဆငျအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမ်းစထရောင်း, 2018-2020 မဟာဗျူဟာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့သည်တူရကီရဲ့ Action Plan ၏အနာဂတ်အပေါ်အလင်းကိုသွန်း။
Arslan သယ်ဆောင်ခံရဖို့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဤဧရိယာ၌ပိုကြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖြစ်မယ့်နိုင်ငံသား-oriented အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ, လူ့ဗဟိုပြု, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အထိခိုက်မခံမူဝါဒများနှင့်မျဉ်းသားရဲ့, တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကနေယူပါလျှင်သင်ခန်းစာများကိုပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့နှင့်တန်ဖိုးရှိရှိ၏ရလဒ်ဖြစ်အသက်ရှင်သူကပြောသည်။
Turk ညီလာခံမှာဆန်းသစ်စမတ်မြို့ applications များမိတ်ဆက် Telekom, တူရကီပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan နှင့်တူရကီဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဒုတိယဝန်ကြီးမှ General Manager Cengiz Dogan ၏သင်တန်းသားများနှင့်အတူ shared အဖြစ်မြူနီစီပယ်, ထိုကဲ့သို့သောမြို့ဝန်အဖြစ်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများ, သက်ဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများပါဝင်သည်ဟုနီးပါးတစျထောငျလူမြိုး၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။
1 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Intelligent သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များညီလာခံစတင်
UITP ညီလာခံ Bursa, တူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်
ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာသဘောပေါက် 107 နှစ်ပတ်လည်ဓါတ်ရထားအိပ်မက် (ဗီဒီယို)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-Eskisehir YHT လိုင်း KM: 460 800 + - + 461 700 လှေငြိမ် Holder သံမဏိလုပ်ခြင်းများအကြား
Katarcıမီးရထားအသင်း TCDD3။ ဧရိယာလည်ပတ်သူများ